बाँकेमा कोरोनो जोखिम कम गर्ने अस्त्र बन्छ त आलोपालो प्रणाली ? - Arthapage
बाँकेमा कोरोनो जोखिम कम गर्ने अस्त्र बन्छ त आलोपालो प्रणाली ?
प्रकाशित मितिः २९ भाद्र २०७७, सोमबार ०८:४२ September 14, 2020
नेपालगन्ज २९ भदौ : कोरोनोको जोखिम कम गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले निषेधाज्ञा, सवारीसाधनदेखि आफ्नै कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई आलोपालो हुने गरी बनाएको छ ।
जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा बाँकेमा हरेक हप्ताको शुक्रवार र शनिवार निषेधाज्ञा लागु हुँदै आएको छ ।
संक्रमणको चेन टुटाउनका लागि अपरिहार्य मान्दै प्रशासनका तर्फ लागु भएको दुई हप्ते निषेधाज्ञाका बिरुद्ध भने बिरोधका स्वरहरु सुनिएका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले दुई दिने निषेधाज्ञाको अर्थ नभएको दावी गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ । यो मागप्रति व्यवसायी मात्र होइन जनस्तरको समेत समर्थन प्राप्त रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
लामो समयदेखि लकडाउन झेलेका आमनागरिकले दुई दिने निषेधाकाको औचित्य देखिरहेका छैनन् । सामाजिक सन्जालमा कोरोनाले शुक्रवार र शनिवार मात्र आउँछु भन्दैन भन्दै व्यंग्य गर्नेको कमी छैन ।
तर जिल्लाको कोभिड नियन्त्रणको अगुवाई गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बागंले संक्रमितले अस्पताल भरिएको र जोखिम यथावत रहेको दुई निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको बताइरहेका छन् । प्रत्येक दिन जसो ४० जना संक्रमित थपिदै गएका कारण प्रशासनले दुई दिने निषेधाज्ञा लगाउने बिकल्प रोजेको देखिन्छ । अन्यथा अन्य दिन बाँकेको जनजीवन सामान्य नै छ ।
निषेधाज्ञा मात्र होइन बाँकेमा जोरबिजोर प्रणालीका आधारमा सवारीसाधन सन्चालन भइरहेको धेरै भयो ।
भिडभाड कम गर्न यो नियम लागु गरिएको हो । बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका अनुसारका सेवाग्राहीलाई आलोपालो प्रणालीका आधारमा सेवा दिने निर्णय गरेको छ । यि आलोपालो प्रणालीले कोरोना नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणमा आलोपालो प्रणाली औषधि सावित हुन्छन् की जनताका लागि कष्ट दिने नियम ? हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मितिः २९ भाद्र २०७७, सोमबार ०८:४२ |
Prevअब निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना पुष्टि भए पनि बीमावापतको पैसा पाइने
Nextचुरोट पिउनु स्वास्थ्यको लागी हानीकारक छ ! नेपालमा चुरोट उत्पादनको इतिहास थाहा पाउनुहोस्